I-china Electric hammer drill bit, i-concrete drill bit, i-SDS, i-Max, i-Hex, i-percussion bit, i-perforator, i-drill bits ifektri nabakhiqizi | Boda
Isando sokuprakthiza i-hammer kagesi, i-SDS, i-Max, i-Hex, i-percussion bit, i-perforator, ama-drill bits
Isando sikagesi kancane luhlobo lwegesi yokujikeleza isando sokujikeleza kagesi ngokuphepha okunamathiselwe okunamathiselwe nge-pneumatic hammering mechanism. Ingavula izimbobo ezingama-6-100 mm ezintweni ezilukhuni njengokhonkolo, izitini, itshe, njll., Ngokusebenza kahle kakhulu.
Kunezinhlobo eziningi zikagesi isando sokuprakthiza izingcezu. Lapho sibhola izinto ezahlukahlukene, sisebenzisa izingcezu ezahlukene zokuprakthiza. Vele, izinhlobo ezahlukene zemishini yokubhoboza zihlukile. Uma sikhathazekile ngokuthenga izingcezwana ezingalungile, kufanele sifunde ngokucophelela imininingwane namamodeli wezingcezu zesando sikagesi. Kungale ndlela kuphela lapho singazi ukuthi siyayidinga yini i-drill bit. Ake sibheke ukucaciswa namamodeli wezingcezu zesando kagesi?
Imininingwane yamabhithi wesando kagesi: 6 mm, 8 mm x 110 mm; 8 mm x 160 mm; 8 mm, 10 mm, 12 mm x 10 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm x 450 mm njll.
Umzimba omkhulu we-cemented carbide hammer drill wenziwe ngensimbi esezingeni eliphakeme, futhi ikhanda le-cutter lifakwe nge-cemented carbide. Ingasetshenziswa ngazo zonke izinhlobo zezando zikagesi. Kukufanele ukubhola kukhonkolo, izitini nezinye izinto zokwakha ezinzima. Ithuluzi lokubhola elinokusetshenziswa okubanzi nokusebenza kahle okukhulu embonini yokwakha nokufaka.
Incazelo yesethi kagesi isando sokuprakthiza isethi: 5 * 110mm, 6 * 110mm, 6 * 160mm, 8 * 160mm, 10 * 160mm njll
Isibambo esiyindilinga nesibambo esiyisikwele se-hammer kagesi kagesi
6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm-28mm njll.
Ubude bokudonsa odongeni yi-350mm
6. Ukusebenza okubili kwesando
Yini okufanele siyinake lapho sisebenzisa isando sikagesi kancane?
1.Izinto ezidinga ukunakekelwa ekusetshenzisweni kwesando sikagesi kancane - qinisekisa ukuthi ukunikezwa kwamandla okuxhunywe kusayithi kuyahambisana neplani kagesi yesando kagesi. Ukuthi isivikeli sokuvuza sixhunyiwe yini. I-drill bit kanye nesiphathi kuzofaniswa futhi kufakwe kahle.
2. Izinyathelo zokuqapha ukusetshenziswa kwesando kagesi sokubhola - lapho kubhola izindonga, uphahla naphansi, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi akhona yini amakhebuli noma amapayipi angcwatshiwe. Lapho usebenza ezindaweni eziphakeme, naka ngokuphelele ukuphepha kwezinto nabahamba ngezinyawo ngezansi, bese usetha izimpawu zokuxwayisa lapho kudingeka.
3. Izinyathelo zokuqapha ukusetshenziswa kwesando sokuprakthiza i-hammer kagesi - qinisekisa ukuthi iswishi yesando inqanyuliwe yini. Uma iswishi kagesi ivuliwe, ithuluzi likagesi lizophenduka kungazelelwe lapho iplagi ifakwa kusokhethi kagesi, engadala ukulimala komuntu siqu. Uma indawo yokusebenza ikude namandla kagesi, kuzosetshenziswa ikhebula lokunwebisa elinamandla anele nokufakwa okufanelekile. Uma ikhebuli yokwelulwa idlula ngendlela yabahamba ngezinyawo, izophakanyiswa noma kuthathwe izinyathelo zokuvimbela ikhebuli ekuphahlazekeni nasekulimaleni
IBOSENDA Electric Hammer Drill Bit / Concrete Drill Bits / Drill Bits / Electric Drill yenziwa ngensimbi engu-40Cr kanye ne-yg8c tungsten alloy. Ngokulawulwa okuqinile kwenqubo yokwelashwa kokushisa okuphezulu, umkhiqizo ujabulela inhlanganisela ephelele yobulukhuni nobulukhuni, futhi ukwelashwa kwayo ebusweni kuhle kakhulu.
Ikhwalithi ephezulu ye-alloy material isetshenziselwa ukwenza ukubhola kubukhali futhi kugqoke imishanguzo, kwandise impilo yesevisi futhi kuthuthukise ukumelana nomthelela.
Iphakethe livame ukufakwa epulasitiki elimhlophe, futhi lingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Olunye uhlobo lwamabhithi we-drill lwenziwe nge-carbon steel.
Isicelo somkhiqizo: isetshenziselwa kabanzi imishini yemabula, igwadle, ukhonkolo, usimende, udonga lwezitini nezinye izinto.
Isibambo sine-max, i-SDS, i-hex kanye nokwenza ngokwezifiso okungejwayelekile.
Qaphela: ubukhulu bemabula kufanele bube ngaphezu kuka-50 mm, futhi ukuqiniswa kufanele kugwenywe lapho kubhola ukhonkolo.
IBOSENDA Electric Hammer Drill Bit ihlinzeka ngosayizi ophelele. Ingahlangabezana nemfuneko yazo zonke izidingo ku-drill bit.
Langaphambilini Ukwakhiwa kwe-drill bit, i-multi-functional alloy drill, i-ceramic tile glass drill bit, i-drill yensimbi, i-Overlord drill, i-marble wall drill, i-cemented carbide hole saw
Olandelayo: Inkatho ezine futhi onqenqemeni ezine Woodworking broach bit, blade ezintathu onqenqemeni rotary rotary, izinkuni sokuprakthiza izingcezu